Anyị nwalere DA144 dodocools. Ọnụ ego gbanwetụrụ na nkọwa ụfọdụ nke ezi ekweisi | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere DA144 dodocools. Ọnụ ego gbanwetụrụ na nkọwa nke ezi ekweisi
Anyị ahụworị ngwa ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ dodocool ma na nke a anyị na-eweta ekweisi egwuregwu egwuregwu na-adịghị mma Igwe okwu eji eme ihe na nhichapụ mkpọtụ. Nke bụ eziokwu bụ na ekweisi ndị a tụrụ anyị n'anya site ezigbo ọnụahịa-arụmọrụ ruru, mana nke a bụ ihe dodocool ka anyị jiri.
Isi okwu nwere plastik mechara na ihe dị iche iche nke dodocools a bụ na ha tinye akụkụ roba (nke nwere ike ịkpụzi) n'elu nke fọdụrụ dị n'elu ntị, na ihe ido onwe ya n'okpuru dị elu karịa ụdị ndị ọzọ ịme egwuregwu na ozugbo ọ na-efu na ha ahapụ.
1 Ọdịdị ọdịyo na nkọwapụta izugbe
2 Njikọ Smartphone
3 Ọrụ na ojiji
Ọdịdị ọdịyo na nkọwapụta izugbe
N'ụzọ ezi uche dị na ogo dị na nke a na ekweisi niile anyị nwere n'ahịa bụ ihe kachasị mkpa maka onye ọrụ, oge a anyị nwere ike ịsị na anyị anaghị eche ihu ekweisi kachasị mma anyị nwere maka taa maka egwuregwu, mana na ike na usoro izugbe ha dị ezigbo mma. N'echiche a, anyị nwere ekweisi dị mma dị mma, mana ka m na-aga n'ihu na mbido nyocha a, ogo ọdịyo dịtụ mma ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ anyị nwalere.
N'ụzọ doro anya, ịzụta ha n'otu okwu agaghị ekwe omume na ọnụahịa siri ike nke dodocools a na-emekwa nnukwu ọdịiche ọzọ iburu n'uche, mana enweghị obi abụọ àgwà nke ọdịyo na ike nke ndị a bụ ezuru ọtụtụ n'ime anyị.
The dodocool DA144 dị ezigbo mma maka egwuregwu na nchịkọta zuru ezu dị ezigbo mma. N'ihi mkpọtụ mkpọtụ CVC 6.0 anyị nwere ike ịdị jụụ site na ụda mgbe anyị zara oku, Igwe arụnyere n’ime ya nwere ezigbo mma, IPX5 a kwadoro mmiri na-eguzogide (na-eguzogide ọgwụ na splashes), na 5 + awa nke ndụ batrị bụ ụfọdụ ụdị nkọwa. Ihe ndi ozo bu:
Versiondị ikuku: BT4.2 na nso ya ruo 10m
Nkwado profaịlụ: HFP V1.6; HSP V1.2; A2DP V1.3; AVRCP V1.6
Audio nyopụta: SBC; AAC
Terydị batrị: Batrị lithium polymer nwere ike ịwụnye ọkụ
Ike batrị: 2 * 95mAh
Batrị batrị: 3.7V
Input voltaji: DC 5V
Ntinye SPL.: 101 ± 3dB
Maị: 3,7 * 2,2 MEMS MIC; -42dB ± 3dB
Nzaghachi okwu okwu: 20Hz-20KHz
Mmetụta: 104dB ± 3dB
Ha nwekwara a akpaka usoro na-agbanyụ ekweisi n'ihe banyere arụghị ọrụ maka 5 nkeji. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ikanam na ala nke ga-arụ ọrụ dị ka ntụnye iji mara ma ha agbanye ma ọ bụ gbanyụọ.
Igweisi ekweisi ndị a dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka ugbu a ma nwee ụzọ ụfọdụ maka ndị ọrụ iOS, ebe ọ bụ na dị ka ihe edetu anyị ga-ekwu na ha na-egosi batrị anyị hapụrụ na dakọtara na onye enyemaka Siri. N'ọnọdụ ọ bụla, ha kwesịrị ekwesị maka ekwentị ọ bụla ma njikọ ahụ dị mfe ịme.
Isi ntị ntị bụ nke aka ekpe ma rụọ ọrụ ha ka anyị kwesịrị pịa bọtịnụ etiti n’ime atọ nke ekweisi nke ọ bụla na-agbakwunye. Ke akpa oge anyị ga-pịa ma jide ike button ruo mgbe ala Ikanam blinks-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie. Mgbe ahụ, anyị na-aga ama na ngalaba Bluetooth anyị ma chọọ maka dododcool DA144. Ikwunye ma laa. Anyị nwere ike iji otu ekweisi na dịka anyị na-ekwu n'okwu a ọ ga-abụ nke aka ekpe. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịnwe ntị n'efu mgbe anyị na-agba ọsọ, na-eje ije ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè.
Ọrụ na ojiji
Onye ọ bụla nke abụọ ezi wireless ekweisi nwee otu bọtịnụ ahụ, yabụ na anyị agaghị efufu ndị njikwa. Ogologo pịa na bọtịnụ etiti na-enye ohere ka agbanye ma gbanyụọ dodocools, otu bọtịnụ ahụ bụ Play, kwụsịtụ ma bulie ma ọ bụ bulie oku mbata. A na-eji bọtịnụ abụọ ndị ọzọ ebuli ma belata olu egwu na ịkwaga n'etiti egwu.
Anyị nwere atọ nke roba Maka ụdị ntị ọ bụla etinye na ngwugwu ahụ, biko tinye otu zipa akpa maka njem na a USB abụọ na-ana ma ekweisi. Ogwe aka dị elu nwere ike idozi ya site na onye ọrụ ma jidesie ya ike nti.
N'ezie gbanwee ụgwọ
Ohere inweta otu
Ike odiyo di elu
Nnwere onwe na nguzogide mmiri
Achọpụta ọdịyo dị mma
Hazie dịtụ ukwuu na nha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị nwalere DA144 dodocools. Ọnụ ego gbanwetụrụ na nkọwa nke ezi ekweisi
N'ihi Duolingo anyị nwere ike ịmụ Klingon n'ụzọ dị mfe
Logitech na-agbasa ezinụlọ G yana ndị ọkà okwu na keyboard maka ndị egwuregwu